Hazard & William Oo Guul Ka Caawiyay Chelsea Xili Blues Ay U Soo Baxday Wareega 16-ka UCL » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Hazard & William Oo Guul Ka Caawiyay Chelsea Xili Blues Ay U Soo Baxday Wareega 16-ka UCL
AbDi RaHmAn AdAnI, Reporter November 22, 2017
Kooxda kubada cagta Chelsea ayaa usoo baxday wareega 16-ka ee tartanka Champions League kadib markii ay kasoo badisay FC Qarabag, oo ku dheeleysa garoonkeeda, waxaana kulankaas uu ahaa mid ka tirsan heerka group-yadda ee koobkaan.
Chelsea, ayaa waxaa bandhiga goolasha waxaa u bilaabay laacibka lagu magacaabo Eden Hazard, kaasoo shabaqa soo taabtay daqiiqadii 21-aad, waxaana uu ahaa goolkiisa mid rigoore ah:- iyadoona uu yimid qeybtii koowaad.
Isla qeybtii koowaad, ayaa waxaa Blues, udhaliyay gool laacibkeeda William, waxaan goolkiisaan uu yimid daqiiqadii 36aad, waxaana sidaas lagu kala nastay qeybta koowaad ee ciyaartaan, halka dhinac ka socotay.
Markii dib leyskugu soo laabtay ayaa waxaa gool sadexaad dhashatay Blues, daqiiqadii 73aad, waxaaan saxiixay goolkaas laacibka Spain, udhashay ee Cese Febregas, iyadoona uu ahaa goolkaas mid rigoore ah.
Blues, oo aad mooday inay kulankaan ay ahayd mid carcar ah, ayaa waxay heshay gool afaraad, waxaana usaxiixay laacibkeeda lagu magacaabo William, waxaana sidaas kusoo dhamaaday kulankaan.